APRICOT, NUTRITION AND RECIPES ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ခု - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ကျန်းမာရေး
Apricot, Nutrition and Recipes များ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ခု
နည်းပညာ BSNL သည်ကာလရှည် Broadband ဆက်သွယ်မှုများမှတပ်ဆင်ခကိုဖယ်ရှားသည်
အားကစား IPL 2021: BalleBaazi.com သည်“ Cricket Machao” လှုပ်ရှားမှုအသစ်ဖြင့်ရာသီကိုကြိုဆိုသည်။
သတင်း Mangaluru ကမ်းခြေမှလှေနှင့်တိုက်မိခြင်းကြောင့်ငါးဖမ်းသမားသုံး ဦး သေဆုံး
နေအိမ် ကျန်းမာရေး အာဟာရ အာဟာရ Oi-Amritha K သည် အမ်ရီတာကေ ဇွန်လ 28, 2019 တွင်
Prunus armeniaca ဟုသိပ္ပံနည်းကျခေါ်ဆိုထားသည့်ပန်းသီးများသည် Plum နှင့် Peach နှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သောအသီးများဖြစ်သည်။ ဤချိုမြိန်သောအသီးများသည်အတွင်းနှင့်အပြင်နှစ်မျိုးစလုံးပျော့ပျောင်းပြီးစွယ်စုံသုံးနိုင်သောအသီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Apricots များသည်အများအားဖြင့်လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်သောအနီရောင်ရှိသော။ သေးငယ်သောအသီးများတွင်ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင်အီး၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ကြေးနီ၊ မန်းဂနိစ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊  ။
အမျှင်ဓာတ်ကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော apricots များကိုအခြောက်လှန်း။ စားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းများကိုလည်းစားသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အစာခြေခြင်းကိုကုသခြင်းနှင့်ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချခြင်းမှသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုကုသပေးခြင်းအထိကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ [နှစ်ခု] ။
Apricot ကိုအမျိုးမျိုးသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများတွင်အသုံးပြုသည်။ ကြက်ဥ၊ ဖျော်ရည်နှင့်ဂျယ်လီ oil ric oil ric ric ric ap ric ric ric ric ric ric အာဟာရကိုလည်းကျန်းမာရေးအမျိုးမျိုးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။
ဤအသီးများတွင်ဂရမ် ၁၀၀ ဂရမ်တွင် ၄၈ ကယ်လိုရီ၊ ၀.၃၉ ဂရမ်နှင့်သံ ၀.၃၉ တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၁၀၀ ဂရမ် apricot ရှိကျန်ရှိသည့်အာဟာရများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်  :
ကယ်လစီယမ်၏ 13 မီလီဂရမ်
Apricots သည်အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝပြီးအူသိမ်အူမင်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အကျိုးရှိသည်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကြောင့်ခံစားရသောသူများသည်ယင်း၏ယုတ်ညံ့သည့်ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် apricots ကိုစားသုံးရန်အကြံပြုသည်  ။ apricots မှဖိုင်ဘာပါဝင်မှုသည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းမှထွက်သောအာဟာရများကိုအာဟာရဓာတ်စုပ်ယူရာတွင်လည်းကောင်း၊
သင်၏နှလုံးကျန်းမာစေသည့်ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရာတွင်ကူညီပေးသောဖိုက်ဘာနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။ apricots ကောင်းမွန်သော (HDL) လက်စထရောကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မကောင်းတဲ့ (LDL) လက်စထရောလျော့ကျသွားသည်။ ဒါ့အပြင်အသီးမှာ system ထဲမှာ electrolyte level ကိုဟန်ချက်ညီစေတဲ့ပိုတက်စီယမ်ပါရှိပါတယ်  ။
အရိုးကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံ၊ ကြေးနီ၊ မန်းဂနိစ်နှင့်ဖော့စဖောရူများစွာပါဝင်သည်  ။ ဤအသီးများကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်စားခြင်းဖြင့်အရိုးပွရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးအရိုးများဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
Apricots များတွင်ပိုတက်ဆီယမ်နှင့်ဆိုဒီယမ်ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောဓာတ်သတ္တုနှစ်မျိုးပါဝင်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အရည်အဆင့်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ ဤဓာတ်သတ္တုများသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအရည်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးစွမ်းအင်ကိုအင်္ဂါများနှင့်ကြွက်သားများသို့ဖြန့်ဝေပေးပြီးဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည်  ။
Apricot များတွင် carotenoids နှင့်အခြား antioxidant ဒြပ်ပေါင်းများပါ ၀ င်ပြီးကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ဤ antioxidants များသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များကိုဖျက်ဆီးခြင်းမှအခမဲ့အစွန်းရောက်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်  ။
6. Aids ကိုယ်အလေးချိန်
ကယ်လိုရီနည်းနေခြင်း၊ apricots သည်သင်၏ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစားအစာအတွက်အကျိုးရှိသည်။ apricots တွင်ပါဝင်သောပျော်ဝင်နိုင်သည့်အမျှင်ဓာတ်သည်သင်၏အစာအိမ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးသင့်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေပြီးကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေသည်။  ။
အဖျားရောဂါခံစားနေရသောလူများတွင် apricot ဖျော်ရည်ကိုသောက်သုံးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓာတ်သတ္တုများနှင့်ဗီတာမင်များအားလုံးပါ ၀ င်သောကြောင့်၊  ။ apricots ရှိစိတ်အေးဆေးသက်သာစေသော anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးဖျားခြင်းမှသက်သာရာရစေသည်။
၈။ RBC အရေအတွက်တိုးလာသည်
apricots အနီရောင်သွေးဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်အတွက်အထောက်အကူပြုကြောင်းသံကြွယ်ဝဖြစ်ကြသည်။ Non-heme သံသည် apricots တွင်ပါဝင်သောသံအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်စုပ်ယူရန်အချိန်ယူပြီးကြာကြာနေသည်နှင့်အမျှသွေးအားနည်းရောဂါကိုကာကွယ်ရန်အခွင့်အလမ်းများလေဖြစ်သည်။ [ဆယ့်တစ်] ။
အသီးတွင်ဗီတာမင်အေရှိနေခြင်းကြောင့်ပုံမှန်စားသုံးခြင်းသည်သင်၏မျက်စိကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်  ။ အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။
apricot တွင်ပါဝင်သော electrolytes များသည် apricot ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးကိုအဓိကပံ့ပိုးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ကြွက်သားကျုံ့ခြင်းကိုလည်းကူညီသည်  ။
ကျန်းမာသော Apricot ချက်ပြုတ်နည်းများ
1 ခွက်အနက်ရောင်ပဲ, ပြုတ်
1 ခွက်ကို apricots ကုန်တယ်
strips တွေခုတ်ဖြတ် 1 အလယ်အလတ်အနီရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်း
1 scallion, ပါးလွှာသော 1 ဇွန်းလတ်ဆတ်သော cilantro ကုန်တယ်
minced 1 လေးညှင်းပွင့်ကြက်သွန်ဖြူ
& frac14 ခွက်ကို apricot ဝတ်ရည်
အလယ်အလတ်ပန်းကန်လုံးထဲတွင်ပဲနက်၊ apricots, ငရုတ်ကောင်း၊ scallion, cilantro နှင့်ကြက်သွန်ဖြူများကိုပေါင်းစပ်ပါ။
ထို့နောက် apricot ဝတ်ရည်၊ ဆီ၊ ဆန်ရှာလကာ၊ ပဲပိစပ်နှင့်ဂျင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးကောင်းစွာလှုပ်ပါ။
apricots, hazelnuts နှင့် maple syrup များပါ ၀ င်သည်။
ကိုယ် ၀ န်နှင့်နို့တိုက်နေသည့်မိခင်များသည် apricot မစားသုံးသင့်ပါ။
အချို့လူများတွင်မူအစာအိမ်ဓာတ်မတည့်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် [ဆယ့်ငါး] ။
apricot အစေ့များကိုအဆိပ်ဖြစ်စေသောကြောင့်မစားသုံးပါနှင့် cyanide အဆိပ်သင့်စေပါသည်။
Chang, အက်စ်ကေ, Alasalvar, C တို့, & Shahidi, အက်ဖ် (2016) ။ သစ်သီးခြောက်ခြောက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Phytochemicals, Antioxidant Efficacies နှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ။ Functional အစားအစာများ၏ဂျာနယ်, 21, 113-132 ။
[နှစ်ခု]Alasalvar, C တို့, & Shahidi, အက်ဖ် (2013) ။ ဖွဲ့စည်းမှု၊ phytochemicals နှင့်အသီးခြောက်များ၏အကျိုးရှိသောကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ သစ်သီးခြောက်များ - Phytochemicals နှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ၊ ၁-၁၉ ။
Slavin, ဂျေအယ်လ်, & လွိုက်, ခ (2012) ။ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ။ အာဟာရတိုးတက်မှုများ၊ ၃ (၄)၊ ၅၀၆-၅၁၆ ။
Skinner, အမ်, & Hunter, D. (Eds ။ ) ။ (2013) ။ အသီးများတွင်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပစ္စည်းများ - ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအစားအစာများ။ Wiley-Blackwell ။
Zeb, အေ, & Mehmood, အက်စ် (2004) ။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများ။ အာဟာရ၏ပါကစ္စတန်ဂျာနယ်,3(3), 199-204 ။
ဗန် Duyn, အမ်အေအက်စ်, & Pivonka, အီး (2000) ။ အစားအစာပညာရှင်အတွက်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားသုံးမှု၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - ရွေးချယ်ထားသောစာပေ။ အမေရိကန် Dietetic Association ၏ဂျာနယ်, 100 (12), 1511-1521 ။
Leccese, အေ, Bartolini, အက်စ်, & Viti, R. (2008) ။ လတ်ဆတ်သော apricots တွင်စုစုပေါင်း antioxidant capacity နှင့် phenolics ပါဝင်သည်။ Acta alimentaria, 37 (1), 65-76 ။
Dutta, D. , Chaudhuri, U. R. , & Chakraborty, R. (2005) ။ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ၊ ဓါတ်တိုးပစ္စည်းပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် carotenoids ၏ပြုပြင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း။ ဇီဝနည်းပညာအာဖရိကဂျာနယ်,4(13) ။
ကမ့်ဘဲလ်, O. အီး, & Padilla-Zakour, O. ဗြဲ (2013) ။ အမျိုးမျိုးသောအခွံနှင့်အခွံများကြောင့်ထိခိုက်သည့်အတိုင်းစည်သွတ်မက်မွန် (Prunus persica) နှင့် apricots (Prunus armeniaca) ၏ Phenolic နှင့် carotenoid ဖွဲ့စည်းမှု။ အစားအစာသုတေသနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, 54 (1), 448-455 ။
Leccese, အေ, Bartolini, အက်စ်, & Viti, R. (2007) ။ apricot သစ်သီးများတွင်စုစုပေါင်း antioxidant capacity နှင့် phenolics ပါဝင်သည်။ အသီးသိပ္ပံ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်,7(2), 3-16 ။
[ဆယ့်တစ်]Kader, အေအေ, Perkins-Veazie, P. , & မျ့ဘဲလျ, G. အအီး (2004) ။ အာဟာရအရည်အသွေးနှင့်လူသား၏ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပုံ။ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ပန်းအလှပြင်ပစ္စည်းနှင့်ပျိုးခင်းစတော့များကိုသိုလှောင်ရုံ၊ ၁၆၆ ။
ဂျွန်ဆင်, အီးဂျေ (2002) ။ လူ့ကျန်းမာရေးအတွက် carotenoids ၏အခန်းကဏ္.ကို။ လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အာဟာရ,5(2), 56-65 ။
Tian, ​​အိပ်ချ်, Zhang က, အိပ်ချ်, Zhan က, P. , & Tian, ​​အက်ဖ် (2011) ။ အဖြူ apricot ဗာဒံသီး (Amygdalus communis L. ) ဆီ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်သောပိုးမွှားများ။ lipid သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဥရောပဂျာနယ်, 113 (9), 1138-1144 ။
အချစ်ရယ်။ (n.d. ) ကျန်းမာသော Apricot ချက်ပြုတ်နည်းများ [blog post] ။ http://www.eatingwell.com/recipes/19191/ingredients/fruit/apricot/?page=3 မှရယူရန်
[ဆယ့်ငါး]Schmitzer, V. , Slatnar, အေ, Mikulic-Petkovsek, အမ်, Veberic, R. , Krska, ခ, & Stampar, အက်ဖ် (2011) ။ apricot (Prunus armeniaca L. ) cultivars ၏မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်း metabolites နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဂျာနယ်, 91 (5), 860-866 ။
4th အိမ်သူအိမ်သားနိုင်ငံခြားအခြေချအတွက် rahu
karishma Sharma က yeh ဟိုင် Mohabbatein နာမကိုအမှီ